Befintlig sida: Ma cuntaa qaad ama qof ehelkaagu?
Föregående sida: Khat
Rugta waxa jooga maalin walba kalkaaliyayaal iyo shaqaale ka tirsan kommuunka (socialsekreterare) oo diyaar u ah inay ka jawaabaan su’aalihiina. Waxa kale oo Rugta ka shaqeeya dhakhtar takhasus ku haysta cudurka dhimirka khibrad dheerna u leh isticmaalka qaadka iyo dhibaatooyoinka uu keeno.
Xarunta waxad ka heli doontaa:
Waxad soo wici kartaa Rugta xilliyadda kor ku xussan. Haddii lagaa qaban waayo, fadlan fariin ka teg si laguu soo woco sida ugu dhaqsaha badan.
Lambarka telefoonka Rugta